Intsimi yesicelo - iDalian Honest Equipment Co., Ltd.
Incinci yokukhasa kunye neyokumba ivili
Ngenxa yeenzuzo zesayizi encinci kunye nexabiso eliphantsi lotyalo-mali, abembi abancinci banoluhlu olubanzi lwezicelo zokuhombisa zokwakha ezidolophini, iigadi zezolimo kunye neminye imiba. Ziyi-panax yemisebenzi yobunjineli encinci.
1. Ukubhukuqwa kwe-greenhouse: izindlu zokugcina izityalo zemifuno ngokubanzi ziphantsi ngokwentelekiso, kwaye oomatshini abakhulu bezolimo abanakho ukwenza imisebenzi kuyo, ke ukubhukuqa kunye nokudiliza imisebenzi kutshintshwe ngabembi abancinci.
Ukwakhiwa kwetonela kwe-2: ukuphakama kwezinto zokumba ezincinci kusezantsi, kunokuvulwa kulwakhiwo oluthile lweetonela, abanye abavelisi bade bavelisa ukumbiwa okuncinci kombane, okufanelekileyo ngakumbi kwimeko yokusebenza kwetonela.
3. Isithando somlilo sentsimbi yokusika: Ukwenza intsimbi ikakhulu kusetyenziswa isiguquli okanye izixhobo zomlilo zombane ukwenza isinyithi, kwaye uninzi lwe-slag yentsimbi lwenziwa kwinkqubo yokunyibilikisa. Kwinkqubo yokujongana ne-slag yentsimbi, ukumbiwa okuncinci kusetyenziselwa ukuguqula i-slag kunye ne-scrape slag, kwaye imeko yokusebenza ayibi kwaphela, eluvavanyweni olukhulu kubaqhubi nakwembiwe.
4. Umhombiso wangaphakathi: kufuneka udilize udonga kwaye uqhekeze umngxunya ngexesha lokuhombisa ngaphakathi. I-mini-excavator iyasebenza ngakumbi kune-sledgehammer eyenziweyo. Ukumbiwa kweMini kuncinci kwaye kunokufikelelwa ngezinyuko okanye ikheshi.
5. Kwinkalo yobunjineli kamasipala: umsele okombiwa kunye nokuzaliswa kwemibhobho engaphantsi komhlaba kubalulekile kulwakhiwo lukamasipala. I-Micro-excavator iye yaba lolona khetho lulungileyo ngobungakanani bayo obuncinci kunye nokuhamba okuguqukayo.Ukongeza, ingalo enkulu yesikratshi esincinci inokujikeleza iidigri ezingama-90, nto leyo iluncedo xa kusombiwa imisele eludongeni. elula, kunye nokusetyenziswa kweelori ezikhanyayo okanye iilori zokuthwala kunokugqitywa.
6. Ukusebenza kwegadi: imeko yokusebenza kwezitiya zezolimo incinci ngokwentelekiso, kwaye imithi engqonge izityalo zivaliwe. Kulwakhiwo lweegadi zezolimo, ukumba kunye nokuchola imisebenzi ayinakuba luncedo koomatshini abakhulu, kwaye abembi abancinci kufanelekile.
7. Ulwakhiwo lwasemaphandleni kunye nolwakhiwo lweendlela: isakhiwo sokuqala sasemaphandleni sifuna ukombiwa kwesiseko kunye nomjelo wamapayipi aphezulu nangaphantsi. Ngoku le misebenzi inokunikezelwa kumbiwa ezincinci ukuba zisombulule, ezinganciphisi kuphela amandla abasebenzi, kodwa zikwaphucula kakhulu isantya sokwakha.
8. Umsebenzi oyingozi kwindawo ephakamileyo: Sihlala sibona abembi abancinci besebenza eweni ezindabeni ngexesha lokwakha amawa okanye umsebenzi wokwakha ngokutsha emva kwentlekele. Isitshisi esincinci se-excavator sinokuthambeka ukuze indawo ephezulu yekhabhathi ihlale ilungile, ngelixa Intambo yocingo iyayinqumamisa le excavator.
I-forklift kunye ne-forklift yombane
I-Forklift ayisebenzisi kuphela ukuthuthwa kwendlela, ukuthuthwa komgaqo kaloliwe, amasebe ezothutho amanzi, kodwa ikwasetyenziswa ngokubanzi kugcino lwezinto kunye nokuhamba, iposi, ezomkhosi kunye namanye amasebe.Ingasetyenziselwa ukuphatha imithwalo eninzi, imithwalo engabekwanga, umthwalo omkhulu, njl., kunye nokusingathwa kwemigama emifutshane. Isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi, kwiindawo zokugcina, kwizikhululo, kumazibuko, kwizikhululo zeenqwelo moya, kwiiyadi zemithwalo, kumaziko okuhambisa nakumaziko okuhambisa nakwezinye iindawo, kudlala indima ebalulekileyo.
Ithemba lemarike ye forklift yombane kunokuthiwa ibanzi kakhulu, enyanisweni, isixhobo sombane sisixhobo sombane, kwaye amandla agcina ibhetri kamva. I-forklift yentengiso yangoku inokuthwala uluhlu lomxhuzulane ngokubanzi kuluhlu lwetoni enye Ukuya kububanzi beetoni, ubukhulu becala phakathi kwe-3.5 yeemitha kunye ne-5.0 yeemitha Isizathu sokuba i-forklift yombane isetyenziswe ngakumbi nangakumbi ngoku kutsha nje inxulumene nokusebenza kwayo kokukhuselwa kwendalo. iilori ze-forklift zangaphakathi, kodwa iindleko zezixhobo zikhulu kakhulu.
Ukuba uthelekisa iimveliso, eyokuqala inokuzisa izibonelelo ezininzi, umzekelo, akusayi kubakho kungcoliseka kwendalo xa usebenzisa olu hlobo lweforklift, kwaye akuyi kubakho ngxolo enkulu xa imveliso isebenza.Ngenxa yolu phawu lwefolokhwe yombane, Uninzi lwamashishini athenga i-forklift ngoku kufuneka athenge olu hlobo lwe-forklift ngokuthe ngqo, ngakumbi xa usebenza ngaphakathi, kunokuthiwa inokuyinciphisa kakhulu ingxolo eveliswe ngaphakathi, ukongeza, kwamanye amashishini aneemfuno eziphakamileyo kakhulu imeko engaphandle, baya kusebenzisa olu hlobo lweforklift.
Isizathu sokusetyenziswa kwe-forklift yombane kwishishini lamayeza kukuba ayizukubangela naluphi na ungcoliseko kwaye ayinampembelelo ekwenziweni kwamayeza. Okwesibini, iifolokhwe zisetyenziselwa imveliso yokutya kunye namashishini okulungisa. Ukusebenza okuphezulu kwendalo esingqongileyo ngumkhwa wolu hlobo, olu hlobo lweforklift luya kuthengwa ngakumbi nangakumbi kwixesha elizayo.Ukongeza kwimbumbulu yombane, ukuthengwa kwezinye iimveliso kufuneka kuthathele ingqalelo kukhuselo lokusingqongileyo.
Isetyenziswa ngokubanzi kwizibuko, kumasifundisane, kwindawo yokwakha nakwezinye iindawo zokuphakamisa nokuphatha oomatshini, i-crane kunye nezixhobo zokuphakamisa, uhlangulo olungxamisekileyo, ukuphakamisa, oomatshini, ukuhlangula. Ii-Cranes zingasetyenziselwa kumasifundisane, isikhululo seenqwelomoya, indlela ehamba ngaphantsi komhlaba, izibuko, umhlaba ongaselunxwemeni, isinyithi, amandla enyukliya kunye nezinye iimeko zokusebenza.Noncedo lwendwe, ubunzima beprojekthi, uninzi lwengxaki yokuphakamisa iimpahla isonjululwe ngokulula. .